Sidee looga Saaraa Xayeysiiska: Dhamaan Wadooyinka iyo Tabaha | War gadget
Qalabkayaga, sida kombiyuutarada ama taleefannada gacanta, waxaa si joogto ah loogu soo bandhigayaa khataro iyo hanjabaado kala duwan. Xaalado badan waxay noqon kartaa virus ama furin, laakiin sidoo kale waxaa jira noocyo kale oo ay tahay inaan sidoo kale tixgalino. Mid ka mid ah wax caadi ah maanta waa adware, taas oo aad xaqiiqdii maqashay mararka qaarkood.
Kadib waxaan dhamaantiin kaaga sheegeynaa adware, si aad u ogaato waxa ay tahay, marka lagu daro siyaabaha aan uga tirtiri karno kumbuyuutarkayaga ama taleefanka gacanta, haddii ay dhacdo in aad cudurka ku qaaddo munaasabad kasta. Waa shay muhiim ah in maskaxda lagu hayo, sidaa darteed hubaal way ku caawin doontaa.
1 Waa maxay adware
2 Maxaa la sameeyaa haddii aan cudurka ku dhacay
3 Sida looga saaro adware qalabka
3.1 Qaab nabdoon
3.2 Qaab / Soo Celin Warshad
Waa maxay adware
Waa software aan loo baahnayn oo loogu talagalay si joogto ah ugu soo bandhig xayeysiiska shaashadda. Adiga oo adware ku rakibaya kombuyuutarkeena ama taleefankeena, waxaan arki doonaa sida xayeysiintu u muuqato marwalba. Marka laga hadlayo kumbuyuutarka, badanaa wuxuu ku jiraa biraawsarka, gaar ahaan halka aan ka helno xayeysiisyadan. Taleefanka, way dhici kartaa inuu ku jiro barnaamij gaar ah, laakiin sidoo kale waxaa lagu tusi karaa shaashadda taleefanka laftiisa.
Caadi ahaan, xayeysiiska ayaa si qarsoodi ah ugu soo dhaca qalabka isagoo iska dhigaya barnaamijyo kale ama gundhig mid kale. Waxay iska dhigi kartaa codsi sharci ah ama lagu dhejin karaa codsi waxayna socon kartaa markii lagu rakibo qalabka su'aasha laga qabo. Waxaan si khalad ah ugu rakibi karnaa kombiyuutar, kiniin ama taleefan casri ah.
Ujeedada adware waa in si joogto ah loo soo bandhigo xayeysiinta. Xaaladaha qaarkood waxay noqon kartaa mid aad u daran oo ficil ahaan waa suurtagal maaha in la isticmaalo qalabkaas oo la sameeyo hawlo caadi ah. Intaas waxaa sii dheer, xaaladaha badankood xayeysiisyadan waa kuwo aan munaasib aheyn, oo ay ku jiraan waxyaabaha qaangaarka ah ama xayeysiisyo ku saabsan alaabooyin asal ahaan shaki badan. Waxa caadiga ah waa inay tahay wax aad u xanaaq badan, laakiin aysan u keenaynin khatar dhab ah amniga isticmaalaha. Waa farqiga ugu weyn ee ay la leedahay malware ama spyware, tusaale ahaan.
Maxaa la sameeyaa haddii aan cudurka ku dhacay
Waxaa macquul ah in waxaad soo degsatay codsi kombuyuutarkaaga ama taleefanka casriga ah taas oo u soo baxday in ay ku faafto adware. Xaaladda noocan ah waa inaan qaadnaa tallaabooyin aan uga hortageyno inay dhibaatadu ka sii darto, marka lagu daro inaan awood u yeelanno inaan si caadi ah mar kale u adeegsanno kiiskan. Nasiib wanaagse, waxaa jira waxyaabo gaar ah oo aan sameyn karno, sida tallaabooyinka aan ku difaaceyno nafteena.
Dabcan, waa inaan ka saarnaa adware-ka aaladda, laakiin tan ka hor, way fiicantahay in la ilaaliyo feylasha iyo xogta aan ku hayno qalabka su'aasha laga qabo, si looga fogaado in wax laga waayo arintan. Sidaas qaado gurmad ahAma kumbuyuutarkaaga ama taleefoonkaaga gacanta, feylashaan waa hubaal in lagula taliyay. Haysashada kayd ayaa naga caawin doonta haddii ay dhacdo inaan u qaabeyno qalabka cabbir xad dhaaf ah si looga takhaluso adware-ka.
Marka xigta, waa muhiim inaan aadno hel meesha arjiga laga hadlayo taas oo soo bandhigtay adware noocaas ah aaladda. Xaalado badan waa wax sahlan, sababtoo ah waxaan arki karnaa in xayeysiisyada ay bilaabeen inay si xad dhaaf ah u muuqdaan kadib markii la rakibey barnaamijkii ugu dambeeyay ee kombiyuutarka ama taleefanka. Laga soo bilaabo wixii aan hore u ogaanay sababta macnahaas. Nasiib darrose, had iyo jeer maahan wax fudud.
Waxaa jira kiisas adware ah ma bilaabayo inuu shaqeeyo ama firfircoonado dhowr toddobaad tan iyo markii la rakibay. Waxaa laga yaabaa inaad ku rakibtay barnaamijyo badan kombiyuutarkaaga ama taleefankaaga wakhtigaas. Markaa waxay noqon kartaa kiiska in marka ugu horeysa aadan aqoon dhab ahaan waxa asal ahaan ka yimid xaddigan xad-dhaafka ah ee xayeysiinta qalabkaaga. In kasta oo xaalado badan ay tahay codsi aan dhowaan rakibnay oo laga yaabo inay horeba dhibaatooyin noo siisay. Sidoo kale haddii aan galno oo ay ka buuxdo xayeysiis, horay ayaan u ogaanay midka ay tahay inaan tirtirno.
Sida looga saaro adware qalabka
Tallaabada ugu horreysa, oo inta badan kiisaska badanaa ku dhammaada adware, waa ka saarida arjiga ama barnaamijka la yiri. Waxaan horeyba uga helnay barnaamijkii dhibaatadan keenay kumbuyuutarkayaga ama telefoonkeena, markaa waa inaan si dhakhso leh uga saarnaa qalabka. Waa cabir sida caadiga ah ka shaqeysa in dhibaatadan qalabka lagu soo afjaro, marka xaalado badan durba waan qabanay.
Haddii la dhaho arjigu waa iska caabbin ama aan sii wadno dhibaato, waxaan u adeegsan karnaa barnaamijyada naga caawiya inaan ka saarno adware Qalabka. Waxaa jira barnaamijyo aad uga caawiya xaaladahaas, sida Malwarebytes, taas oo noo oggolaaneysa inaan ka tirtirno kombiyuutarka kombiyuutarka noocan ah ee software-ka ah, haddii ay dhacdo inaannaan awoodin inaan nafteenna qabanno. Qaar badan oo ka mid ah barnaamijyadani waa bilaash ama waxaa jira kuwo lacag la siiyay, laakiin leh noocyo tijaabo oo bilaash ah, oo aan isticmaali karno wakhti kasta. Sidoo kale antivirus caadi ah ayaa naga caawin doona kiiskan si aan u awoodno inaan uga tirtirno kombiyuutarka. Taleefanka Android, Play Protect ayaa naga caawin kara arrintan.
Haddii howshu wali shaqeyn weydo, waxaan u adeegsan karnaa hab aamin ah. Ku bilaabida qalabkeena qaab amaan ah waxay nagu hogaamineysaa xaalad aan ka tirtiri karno hanjabaadaha kombiyuutarka, waa jawi xiran oo aan ku sameyn karno tan. Marka waxaa habboon in lagu bilaabo kumbuyuutarkaaga ama taleefankaaga qaab nabdoon, si looga saaro adware noocaas ah, haddii tallaabooyinka kor ku xusan aysan shaqeyn. Sidee ayaad tan u sameysaa:
Windows 10: Dib u bilaw kumbuyuutarka oo marka uu bilaabmayo ee shaashadda bilowgu soo baxayso, hoos u dhig furaha Shift adoo gujinaya astaanta awoodda, illaa kumbuyuutarku dib u bilaabo. Markay taasi dhacdo, dhagsii ikhtiyaarka dhibaatada (Troubleshoot) ka dibna tag Xulashada Hormarsan. Dhexdeeda, waxaan galnaa Nidaamyada Bilowga ka dibna riix dib u bilaabista. Shaashadda ikhtiyaarrada kabaha, riix furaha ku xiga Habka Nabdoon ee Isku xirka. Xaalado badan badanaa waa F5.
Android: Habka amaanku wuxuu u bilaabmaa si isku mid ah telefoonada Android guud ahaan. Ku hay badhanka korontada cadaadis xoogaa ilbiriqsiyo ah illaa ikhtiyaarrada ay ka muuqdaan shaashadda oo aan riixno oo aan qabanno ikhtiyaarka aan daminno dhowr ilbiriqsi Farriin ayaa soo muuqan doonta oo sheegeysa inay dib ugu bilaabaneyso qaab nabdoon, waxaan ku siineynaa inay aqbasho oo ay sugto illaa habka aaminka ah dib loogu bilaabayo Android.
Qaab / Soo Celin Warshad
Haddii aysan waxba ka shaqeyn kiiskan, markasta waanu qaabeyn karnaa qalabka, si adware-ka si joogto ah looga saaro kombiyuutarka. In Windows 10 waxaan awood u leenahay inaan qaabeyno adigoon lumineynin xogta, taas oo shaki la'aan ka dhigaysa howshan mid aad u fudud. Laakiin talobixinta xaalad kasta waa in la sameeyo nuqullo keyd ah, si ay u dhici karto.
Windows 10: Fur goobaha kombiyuutarka oo gal Cusboonaysiinta iyo amniga. Tag qaybta soo kabashada ka dibna riix dib u dajinta kombuyuutarkan. Waxaad kala dooran kartaa qaabeynta adiga oo aan xog kaa lumin ama aan tirtirin xogta, adeegso ikhtiyaarka aad rabto oo aad raacdo talaabooyinka shaashadda.
Android: Gali goobaha taleefanka oo tag qaybta Nidaamka. Gali qaybta dib udajinta ama dib udajinta oo dooro ikhtiyaarka aad dib ugu dhigto taleefanka. Raac tallaabooyinka lagu muujiyey shaashadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Sidee looga saaraa adware
Ka waran Fortnite? Goorma ayuu Fortnite soo laabanayaa?
Isku soo wada duuboo, waxaan ku baxeynaa gawaarida ugu dhameystiran